Emva kokuhlala kumzi mveliso we-silicone ixesha elide, abathengi abaninzi baya kuwuva lo mbuzo: iimveliso ze-silicone ezinobungakanani obufanayo okanye ulwakhiwo olufanayo lunexabiso elahlukileyo. Kule sihloko, bekukho into endikhathazayo okwexeshana. Ukusombulula le ngxaki, ukongeza kufundo ...
1. Ngokobungakanani bevolthi yothutho, yahlulwe yazi: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 Iimodeli ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ezinje ngeB1400 (B imele ububanzi, ngeemilimitha). Okwangoku, amandla emveliso amakhulu e-B2200mm ibhanti yokuhambisa. 2. Ngokwe u ...
Isizathu sebhanti eyaphukileyo
1. Isizathu sebhanti eyaphukileyo (1) Uxinzelelo lwebhanti yokuhambisa alonelanga (2) Ibhanti yokuhambisa sele isetyenzisiwe ixesha elide kwaye iyaguga kakhulu. (3) Iziqwenga ezinkulu zezinto okanye isinyithi sityumza ibhanti yokuhambisa okanye ijam. (4) Umgangatho welindle lokuhambisa ibhanti awufikeleli kum ...